ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: April 2012
တဖွဲဖွဲကျနေတဲ့ မိုးစက်လေးတွေရယ် …
တသွဲ့သွဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေညင်းလေးတွေရယ် …
ပြည့်ဝစွာသာနေပေမယ့် မိုးစက်လေးတွေကြောင့် မှုန်တခါ၊ လင်းတလှည့်နဲ့သာပေးနေရရှာတဲ့ လမင်းကြီးရယ် ငါ့ရင်ထဲက လွမ်းစိတ်တွေကို ညှို့ယူနေသလားကွယ် ….
ဟိုးဝေးဝေးကိုငေးကြည့်ရင်း သိပ်မဝေးသေးတဲ့ အတိတ်ကို ငါလွမ်းဆွတ်တယ်။
ငါရဲ့ ဖုန်းကလေးရေ …. ငါ့ရဲ့ နှိုးစက်တမန်တော်လေးရေ …
နင်ကော ငါ့ရဲ့နတ်သားလေးကို မလွမ်းဘူးလားဟင် …..
ငါကတော့ ဖုန်းထဲက အိပ်ချင်မူးတူး အသံလေးကိုလွမ်းတယ် ….
ငါ စိတ်ညစ်တိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဒေါသထွက်တိုင်း
ငါ့ကို စိတ်ပြေအောင် ချော့မော့လေ့ရှိတဲ့ ငါ့ရဲ့ချစ်သူလေးကိုလွမ်းတယ် ….
လေညင်းလေးရေ နင်ကတော့ပျော်နေမလားပဲ …
နင့်ချစ်သူ မိုးစက်လေးတွေနဲ့ ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားနေရလို့လေ ….
အို …. လေညင်းလေးရေ ..
ငါ့ပါးကို ပွတ်သပ်လို့ နှစ်သိမ့်မှုတွေပေးနေသလားကွယ် ….
ငါ နင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
ဒါပေမယ့် ငါ့ချစ်သူလေးကို လွမ်းနေတုန်းပဲကွယ် ….
ကျလုစနေရောင်ခြည်လေးရေ နင်သိပ်လှနေပါလား ….
ငါ့ချစ်သူလေးကလဲ ငါရုံးအဆင်းကို စောင့်နေလေရဲ့ …
ငါ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့် လက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ငါ့ချစ်သူလေးရေ ….
ငါ နင့်ကိုသိပ်လွမ်းနေတယ် ….
ခိုင်မာတဲ့ လက်တစ်ဘက်က ငါ့လက်တစ်ဘက်ကို မြဲမြဲတွဲလို့
ငါ့ညနေတွေ သိပ်လှခဲ့ဖူးတယ်လေ ….
မပျင်းမရိ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေ ချက်ကျွေးတတ်တဲ့
ငါ့ကိုရော နင်လွမ်းနေရဲ့လား ….
မျက်နှာကို တချက် တချက် လာစင်တဲ့ မိုးပေါက်လေးတွေရေ …
အလွမ်းက မျက်ရည်ကိုချူတတ်သလားဟင် …
ငါ့ရင်ထဲက အလွမ်းတွေက ငါ့မျက်လုံးတွေကို မှုန်ဝါးစေသတဲ့လား …
ပူနွေးတဲ့မိုးရေစက်လေး တစ်စက် ငါ့လက်ဖမိုးပေါ်ပေါက်ကနဲ ကျလာသလား …
ငါလေ နင့်ကို နင့်နင့်သည်းသည်းလွမ်းနေတယ် …..
မှတ်ချက်။ ။ ဒီစာလေးက ကဗျာလဲ မဟုတ် စာလဲ မဟုတ်ပါဘူး ... တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူကိုလွမ်းလွန်းလို့ ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းချရေးထားတာပါ ... စာလာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:04 AM7comments Links to this post
ရေတစ်စွတ်နဲ့သာ ရွှေမျက်နှာ လန်းရတယ်
အမှန်လေ သဘာဝပေမို့ မလွှဲသာ တွေးမလွမ်းနိုင်ဘု
ပါးနှစ်ဖက်မှာ ချွေးစက်ရာ ဗရပွထင်တဲ့ထိ
ခါးချိုးကာ မီး မှုတ်ရပြန်။
ဆီကြွင်းရယ် ဆား အနည်းငယ်ဖြူးပါလို့
ကိုယ်ပိုင်ရာ အကြော်နန်းဆီသို့ ဗရုတ်ဗရက်သုတ်ခြေတင်
စားပွဲငယ်တစ်ချပ်ခင်းပါလို့ ဗူး၊ဖယုံ၊ သီးနှံအစုံ ပုံလို့တင်
မုန့်နှစ်ပြင်၊ ထင်းမီးဖိုနှင့် ဆီအိုးရယ်က အသင့်ပြင်
ကြော်မဟဲ့ ပူနွေးတဲ့ အကြော်စုံ
တစ်ခုမှ ၁၀၀ကျပ်ရယ်နဲ့ လှိုင်လှိုင်သာ ၀ယ်ကြစမ်းပါ
ဟော့ဒီက ကြွပ်ရွတဲ့ အကြော်စုံ။ ။
ရေးသားသူ။ ။ ဖြိုးဇာနည်၊ ကြယ်ပြာ
မှတ်ချက်။ ။ ပုံလေးကို ကျောက်ပန်းတောင်း.org ကနေယူထားပါတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 1:58 AM 11 comments Links to this post